Apple inonyora mitanhatu mitsva yeApple Watch pamwe neEurasian Commission | IPhone nhau
Isu tiri pasi pemwedzi kubva pane izvo zvinogona kuitika Keynote kuratidzwa kwemidziyo mitsva yeApple, mwedzi kwatiri kuti tizive kuti avo vanobva kuCupertino vanoda kurova vakwikwidzi vavo vakuru, uye isu takatokuudza kuti tichava nemidziyo yemarudzi ese. Munguva yezhizha isu tinogona kuona ese beta mabhureki eApple anoshanda masisitimu, asi zvakare iri nguva yekuziva ese makuhwa, uye hongu, zvinhu zvakawanda uye zvakawanda zvinosimbiswa kwatiri uye zvakanyanya nekuwanda zviri chaizvo. Iye zvino tangogamuchira iyo ruzivo kuti Apple ichangobva kunyoresa iyo nyowani Apple Watch yatichaona munaGunyana mune yeEurasian Commission. Ramba uchiverenga kuti isu tinokupa iwe zvese izvo ruzivo.
Maitiro ekumanikidza Uye kana vachizviita izvozvi, imhaka yekuti kuvhurwa kwemidziyo kwakarongerwa mwedzi waGunyana semazuva ese. Uye mune ino kesi Apple yanga ichida kunyoresa matanhatu akasiyana Apple Watch mamodheru muEurasian commission database. Izvi zvinorevei? isu tinofanirwa kufunga kuti saizi yega yega yeApple Watch ndeyakasiyana modhi, saka tichanyatso ona maviri mamodheru eApple Watch Series 7 (ane maviri akaenzana saizi), uye Apple Tarisa SE, kana runyerekupe Apple Watch yemitambo yakanyanyisa (ine hukuru hwayo huviri).
Uye kwete Apple Watch chete, kubva kuCupertino ivo vanga vachidawo kunyoresa maviri matsva Mac mamodheru izvo zvaizosimbisa runyerekupe rwekuti pakupera kwegore Apple yakafunga kuvhura iyo nyowani MacBook Pro M1 nemamwe masayizi. Tinofanira kumirira, zvingangoita kuti tichava neKeynote muvhiki yekutanga yaGunyana saka pane zvishoma zvasara. Aya anongova marekodhi, chiri pachena ndechekuti michina yekumisikidzwa kwezvigadzirwa zvitsva iri kutoshanda. Uye newe, Chii chaunonyanya kuda kuona?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inonyoresa mitanhatu mitsva yeApple Watch pamwe neEurasian Commission
Izvozvi zvave kuita kuti ugadzire account paTwitter kuburikidza neKusaina neApple